I-Apartment enombono wolwandle - I-Airbnb
I-Apartment enombono wolwandle
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMarie
Indawo yokuhlala ezolileyo, eluhlaza kunye nekhuselekileyo emini nasebusuku kunye nokubekwa kweliso kwevidiyo. Iivenkile zasekuhlaleni: indawo yabakhenkethi: uhambo oluya elwandle kunye nokujikeleza iSiqithi
Izithuthi zikawonke-wonke, iteksi, irenti yemoto, iindawo zokuthenga ezi-2: Intermart (Intermarché France) kunye neSuper U, indawo yokuphulula umzimba kunye nesaluni yokulungisa iinwele, iindawo zokutyela ezininzi, oogqirha kunye neekhemesti.
Ekhitshini, uya kufumana zonke izixhobo zokupheka kunye nokubhaka
Ukuphela kokuhlanjululwa kokuhlala, ixabiso elimiselweyo le-euro ezili-15 liya kucelwa ukuba kuhlanjwe amashidi, iitawuli kunye neetiyi; okunye ukucoca: izitya, imigangatho kunye nezindlu zangasese eziseleyo ngeendleko zakho.
Indawo imnandi, idlamkile kakhulu ngaselwandle kwaye izolile ngaphakathi nangaphakathi kwendawo yokuhlala
J'ai 66 ans. J'aime voyager, danse de salon
Kwiimeko apho ndiza kuba sesiza eMauritius, ndiya kuba nethuba lokusebenzisa abamkeli bam ngobulumko ukubanceda bafumanise esi siqithi ngokuphuma kumkhondo obethiweyo wencam yonxweme. Bendikwazi nokubalanda e airport
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Trou-aux-Biches